Tsy Handefa Mivantana Ny Fizaran-Dokan’ny Filma Avy Ao Hong Kong i Shina Noho Ilay Sarimihetsika Mangidy Fijery Mitondra Ny Lohateny Hoe ‘Folo Taona’ · Global Voices teny Malagasy
Tsy Handefa Mivantana Ny Fizaran-Dokan'ny Filma Avy Ao Hong Kong i Shina Noho Ilay Sarimihetsika Mangidy Fijery Mitondra Ny Lohateny Hoe ‘Folo Taona’
Voadika ny 09 Marsa 2016 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Pikantsary tamin'ny sombin'ny sarimihetsika Folo Taona.
Tsy afaka hijery ny Amboaran'ny Sarimihetsika ao Hong Kong andiany faha-35 fanao isan-taona amin'ny fahitalavitra na amin'ny aterineto ny Shinoa tanibe amin'ity taona ity, ny anton'izany dia noho ilay sarimihetsika tsy miankina antsoina hoe “Folo Taona” voatendry hifaninana amin'ny Sarimihetsika Tsara Indrindra tamin'ny 2015.
Ny fizaran-doka, natsangana tamin'ny taona 1982, dia iray amin'ireo lanonana hajaina indrindra ho fankalazana ny zava-bitan'ny indostrian'ny sarimihetsika amin'ny teny Shinoa. Tahaka ny taona maro lasa, ny Fahitalavim-panjakana ao Shina (CCTV) sy ny goavan'ny teknolojia, fahitalavitra antserasera Tencent no manana ny zo amin'ny fandefasana ny lanonana fanolorana loka ho hitan'ny mpijery ao Shina Tanibe. Saingy, na dia teo aza ny fifanarahana voalohany nataon'izy ireo, dia niala tampoka tsy handefa ny lanonana ny roa tonta, izay tokony hotontosaina amin'ny 3 Aprily.
Nanambara ny mpikarakara ny loka fa nandrara ny fandefasana ny lanonana ao Shina ny Biraon'ny Fitantanana ny Tontolon'ny Aterineto ao Shina, tarihin'i Liu Wei satria tsy nankasitraka ny fanendrena ny “Folo taona” ny manampahefana.
Ahitana fizarana dimy ny sarimihetsika tsy nandaniana vola-be “Folo Taona”, manoritsoritra ny hoavy mangidy (mifanohitra amin'ny mampanofinofy) any Hong Kong amin'ny taona 2025 noho ny fitsabahana tsy mitsahatra ataon'i Shina ao an-tanàna ny fizarana tsirairay. Nahazo sitraka tao Hong Kong ny sarimihetsika, nankasitrahana noho ny fanehoana ny fihetseham-po malaza ao an-toerana. Raha ny marina, dia resiny ny fizarana nivoaka farany indrindra tamin'ny Star Wars tamin'ny fivarotan-tapakila ao an-toerana. Ity ambany ity ny sombiny ofisialy amin'ny sarimihetsika (miaraka amin'ny dikanteny Anglisy):
Mampiseho olona hafahafa mandoro ny tenan'izy ireo teo anoloan'ny masoivoho Britanika ny ray amin'ireo fizarana ao amin'ny sarimihetsika, nampitondraina ny lohateny hoe “Self-Immolator” izay nisongadina tamin'ny fantsom-baovao Amerikanina CNN. Ny tantara dia napetraka andamosin'ny “hetsika mpandala ny ao an-toerana” izay mitsipaka ny tsindry aneren'i Shina tanibe ho mari-panondroana azy ireo rehefa naverina tamin'i Shina indray i Hong Kong tamin'ny 1997 rehefa avy zanatany britanika.
Amin'ny mahafitantanam-paritra manokana azy dia heverina ho manana haavom-pizakantena ambonimbony ihany i Hong Kong manoloana ny tanibe. saingy be ny fanahiana fa gejain'ny antoko komonista tsikelikely ny fahafahana antonontonony ananan'ny tanàna — ary tsy ahiahy tsy amin'antony izany [mg]. Mandritra izany fotoana izany, nisy toby prô-demokrasia iray tao an-tanàna nanentana ny hahazoana zo bebe kokoa ao anatin'ny taona maro. Tamin'ny 2014, an'arivony no nanatevin-daharana ny Hetsi-panoheran'ny Elo izay nibodo ny afovoan-tanànan'i Hong Kong nandritra ny telo volana, nitaky ny hahafahan'ny olom-pirenena ho afaka hanendry kandidà. Rehefa tsy nahomby ny hetsi-panoherana am-pilaminana, dia nisy ireo “mpandala ny ao an-toerana” manana lonilony nanandra-teny ny amin'ny tokony ampiasaina teti-panorona sahisahy sy miatrika ady kokoa ho fanomezana hery ny fizakantenan'ny tanàna.
Nanandram-peo anefa ny mpitondratenin'ny Antoko Komonista Shinoa, Global Times, fa “viriosy” mampiely fahakiviana sy tebiteby ao an-tanàna ny sarimihetsika. Nasehon'ny tatitra fa mifandray mivantana amin'ny fanendrena ny “Folo Taona” ho eo amin'ny Filma Tsara Indrindra ny fandrarana ka izany no nahatonga ny baiko ho avy any amin'ny manampahefana ambony indrindra eo amin'ny sehatry ny fampielezankevitry ny firenena. Ankoatra ny tsy handefasana lanonana any amin'ny haino aman-jery, dia nobaikoana tsy hahazo hiteny na inona na inona na hanonona ilay filma ny sehatra fampitam-baovao rehetra.
Ho setrin'ny fandrarana, dia niteny tamin'ny mpanangom-baovaon'ny sehatra fampitam-baovao an-tserasera HK01 ny talen'ny “Mpandoro-Tena”, Kiwi Chow:
Ny fomba ifehezany ny raharaha no mitaratra ny tebitebin'izy ireo manoloana ny sarimihetsika [ho fampitan-kafatra]. Inona tokoa no tena atahoran'i Beijing? Tsy te-hanome valiny mivantana aho, saingy tiako atoraka amin'ny rehetra izany fanontaniana izany: Inona no tena mampatahotra amin'ilay filma? Nandoko eritreritra sy fomba fijery isankarazany ilay filma; mety ho teboka fiaingana hifandraisana sy hifankahazoana io. Ka inona ary no tena atahorany?
Nifandamina ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny kolejy sy oniversite 12 ao an-toerana fa hifandimby amin'ny fijerena ilay sarimihetsika mandritra ny volana Febroary sy Marsa.
Tsinjo ho tsy nijanona teo amin'ny fizaran-dokan'i Hong Kong ihany i Shina. Tamin'ny 22 Febroary dia voatatitra fa nandrara ny fandefasana ny fizaran-dokan-tsarimihetsika Taiwaney Soavaly Volamena tsy ho azo alefa any amin'ny Tanibe ihany koa ny manampahefanan'ny propagandy shinoa.